ရွှေနိုင်ငံ: တန်ချိန်ထောင်ချီသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ “ဖြစ်ရပ်မှန်လား---လုပ်ကြံပြောဆိုမှုလား” - အပိုင်း (၃)
ကျိုင်းတောင်းနှင့် မော်ဖတို့တွင် ဘိန်းစုဆောင်းရာနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကြီးစားစက်ရုံများကို “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု နှင့်အတူ အက်ဖတမင်းဆေးပြားများကိုလည်း စံချိန်တင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု အခွင့်အာဏာသည် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတာဝန်ခံ ဗိုယူလိုင် နှင့် မန်နေဂျာဖြစ်သူ စက်ရုံတာဝန်ခံ ကျိုင်ကျင်းရှုံ တို့တွင်သာရှိပါသည်။ မုံးပေါ် စက်ရုံမှ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ဘိန်းဖြူ ၂ မက်ထရစ်တန်ခန့်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိ ပါသည်။ အခြားစက်ရုံ ၂ ခုကိုလည်း နမ့်တစ်တွင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အဖက်တမင်းဆေးပြား ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ဗိုရိုလှိုင် ကခွင့်ပြုပေးပြီး ဒုတပ်မှူးများဖြစ်သော အိုက်လန် နှင့် ဇိုဇောင်ဒန်း၊ တပ်မဟာ (၄၆၈)မှူး လီအိုက်ရှု၊ ဗိုယူဟန်၏ ဒုတိယမြောက်သမီးဖြစ်သူ တို့ကိုတာဝန်ယူစေပါသည်။
“ဝ” တပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်သော အဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏တံဆိပ်မှာ Y1 ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် နာမည်ကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နမ့်တစ်-မိုင်းမော-မိုင်းလား လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ မှောင်ခိုရောင်းချပြီး ကျန် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် အခြားသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ ရောင်းချပါသည်။ အချို့ကို မဲခေါင်မြစ်ဖြတ်၍ ပို့ဆောင်ပြီး လာအို နိုင်ငံအတွင်းရှိ လျှို့ဝှက်နေရာများတွင် ထိန်းသိမ်းထားကာ ထိုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အခြားသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ရောင်းချပါသည်။ ထိုလျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းများကို ကူညီလုပ်ဆောင် ပေးရန်အတွက် လက်ထောက်အဖြစ် ဝေဆူးကျန် ၏ သားဖြစ်သူ လိုင်ဆန် အားခန့်အပ်ထားပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှငွေကြေးအမြောက်အများရရှိသဖြင့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့ သည် ရဟတ်ယာဉ်များ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်များနှင့် ခေတ်မီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို ပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းမှ မှောင်ခိုတင်သွင်းခြင်း၊ လက်နက်ငယ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်စက်ရုံးများမှ မှောင်ခိုဝယ်ယူခြင်းတို့ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ မကြာသေးမီကတွေ့ခဲ့ရသော ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအရ “ဝ” တပ်ဖွဲ့တွင် သံချပ်ကာကားများပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အေပြီလ အတွင်းက ခေတ်မီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအပြည့်သယ်ဆောင်လာသော ကွန်တိန်နာပေါင်း ၁၀ဝ ကျော် ကို မဲခေါင်မြစ်တစ်လျှောက် သယ်ဆောင်လာပြီး စွတ်ပလွေ ဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်ရှိရာ ပန်ဆန်းသို့ ၁၂ ဘီးယာဉ်ကြီးများဖြင့် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသယ်ယူမှုများတွင် ပုခုံးထမ်း လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်များလည်းပါရှိကြောင်းကို မဲခေါင်မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ရှိ သတင်း အရင်းအမြစ်များမှ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ဗိုယူဟိုင်း နှင့် အခြားသော “ဝ” တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၂၁ ဦးတို့သည် အမေရိကန် DEA ၏ အလိုရှိသူများစာရင်းတွင်ပါဝင်နေပါသည်။ ထိုအချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှာ စိုင်းလျန် ဖြစ်ပြီး ရွှေတြိဂံဒေသ လာအိုနိုင်ငံအတွင်းရှိ King Romanson ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပိုင်ရှင်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သော တရုတ်နိုင်ငံသား ကျန်းဝေ နှင့်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို ကျန်းဝေ ပိုင်သော သင်္ဘောများကို စွတ်ပုလွေ ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းတွင် မကြာခဏတွေ့ရပါသည်။ ကုန်တင်ကုန်ချ ပြီးချိန်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသင်္ဘောကိုယ်ထည်များအတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာဖုံးကွယ်ထည့်သွင်းကြ ပါသည်။ ညအချိန်တွင် အမှောင်ထုကိုအကာအကွယ်ယူ၍ မိုင်းမောဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်အောင် သယ်ဆောင်သွားကြပါသည်။ ထိုဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ကုန်တင်ကားများဖြင့် သယ်ဆောင်ကာ လောင်းကစားရုံသို့သယ်ဆောင်ကြပါသည်။
စိုင်းလင်းအနေဖြင့် “ဝ” နယ်မြေအတွင်းမှထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ အကောက်အခွန်များစွာရရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွတ်ပုလွေ ဆိပ်ကမ်းသည် “ဝ” တပ်ဖွဲ့နှင့် စိုင်းလင်း၏ မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့တို့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးများသယ်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရာ အသက်သွေးကြောဖြစ်လာ ပါသည်။
On April 17, 1989 ethnic Wa faction, under the leadership of Chao Ngi Lai and Bao Youxian, occupied the headquarters of the Burma Communist party and declared their defection, announcing the formation of the Wa Army.
The Wa army, which was transformed from the Burma Communist Party troops, openly declared in 2005 the Wa region to be “Drug Free Zone”. Contrary to this scheme clandestine operations of growing opium, producing all kinds of drugs, transporting and distributing were done discreetly. The Wa army was labeled asanarcotic trafficking organization by the US government on May 29, 2003. While hiding their drug producing and distributing operations under the pretext of “Anti-drug” movement, the Wa army was heavily engaged in purchasing all the opium grown in all of the Shan States using big towns such as Keng Tung and Small villages such as Maw Pha as collecting points and processed the opium products at large production plants In the Wa administrative region. Besides heroin, the Wa have managed to produce Amphetamine tablets toarecord high level. The sole authority to produce heroin lies in the hands of the head of the finance department Bao You Liang and the manager in charge of the facility is no one other than his close aide Jiang Jing Shont. One facility in Mong Pawk produced two metric tons of heroines at average annually. Another two facilities were built at Nam tip. The license or authority to produce Amphetamines was issued by Bao Yeo Hlaing to the two Vice army commanders Ai Lun and Zhau Zhong Dang ,commander of brigade (468) Li Ai Shu and second daughter of Bao Youxian.
The brand of the Amphetamines produced by the Wa Army is the “Y1”, which is the most popular in the region and other parts of the world. 50 % of the products are smuggled into China along the Namtic, Mong Mao, Mong La route and another 50% to other parts of the world via Thailand asastaging area. Some are transported across Mekong River and stored in secret hiding places in Laos from which they are smuggled out to Thailand, Malaysia and other parts for the world. The man in charge of all the clandestine operations is the close aide come adopted son of Wei Hsueh-Kang, Lao San.
Acquiring abundant of wealth from these drug trade, the Wa Army purchased helicopters and all kinds of modern military equipment including anti aircraft missiles, known to be smuggled out from Western Pakistan and small arms manufacturing shops. Recent photos showed Wa army in possession of armoured cars. In April of 2012 over 100 containers stuffed with all kinds of modern arms and equipments were shipped along the Mekong River to Suplwe harbour from which they were transported to Pang Sang, the Headquarters of the Wa Army, on 12 wheeler trucks. Included in the shipment were shoulder launched anti aircraft weapons, according to sources along the Mekong river.
Bao Youxian and 21 other leaders of the Wa Army were included in the US DEA’s most wanted list since 2005. Whether it is revived is the matter of the anti-drug policy of the US State Department,along shot perhaps.
Mong La Force
The leader of the Mong La Force, Sai Luen wasaclose business associate and partner of Jing Wei,aChinese national, the very owner of the famous King Romanson Casino, situated in the Golden Triangle area of Laos inclusive of his drug operations. Quite frequently, vessels owned by Jing Hwei were seen at the dry dock at Sud Ploy harbour. After each dry dock session, drugs - which were said never to be uncovered even byapolice force of 100 men - were expertly hidden all through the vessel’s structure. Then the vessels will crawl to the Laotian port of Mong Maw when night fell, under cover of darkness, from which the hidden merchandise was shipped to the casino on lorries.
On the other hand Sai Linn regularly received large amount of tax from drugs produced from the Wa Army area transported elsewhere. Thus the Sud Ploy harbour became the bloodline for the shipping and distribution of drugs for Wa Army as well as Sai Linn’s Mong La Force.
Credit-Aung Kyaw Nyunt